Thenga i-11-Ketotestosterone powder (564-35-2) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / 11-Ketotestosterone powder
SKU: 564-35-2. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-11-Ketotestosterone powder (564-35-2), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
11-Ketotestosterone powder inxalenye efanayo ne-hormone testosterone kodwa yinto eyenziwa ngokwemvelo njenge-androgen ephambili kwiintlanzi. Isasazwa ngokubanzi kulo lonke ubukumkani bezilwanyana kunye nenkxaso yokutya. Ayiguquli kwi-estrogeneven ukuba inomsebenzi onamandla we-anabolic ....
11-Ketotestosterone powder Abalinganiswa basisiseko
I-11-Ketotestosterone powder kwisijikelezo somhlaza
Amagama ebhanti: 11-Ketotestosterone powder
Igama loGeneric: 11-Ketotestosterone powder uthenge, 564-35-2
Ukusetyenziswa kwe-11-Ketotestosterone powder
I-11-Ketotestosterone powder (i-CAS 564-35-2) isebenza kwimida emibini eyahlukileyo ngexesha elifanayo kwiindawo ezinobuncwane ezinobungozi obunzima kunye nokubeka umzimba kwi-anabolic overdrive. Ingumzimba we-anabolic ovela ngokwemvelo ofumaneka kwiingcamango zabantu kwi-metabolite ye-hormone ye-adrenal kwaye yinto ephezulu kunye ne-androgen kwiintlanzi ezenza ukuba kubekho ukutya. Isebenza ngaphandle kokuguqulwa, ayikwazi ukuxhamla, kwaye ngokugqithiseleyo njenge testosterone, ivuselela i-androgen receptor. Iyanciphisa amazinga e-cortisol kwimiba yeoli kunye nesibindi ngenxa yokuba isishibitor esomeleleyo nesakhethiweyo somsebenzi we-reductase we-11β-HSD1. Amanqanaba aphezulu ama-cortisols kulawo maqhosha ahlanganiswe nenani leempawu ze-syndrome ye-metabolic syndrome, njengokwenyuka kwemveliso ye-glucose ye-hepatic, i-adipocyte differentiation, ukukhuluphala komphambili, kunye nokuchasana kwe-insulin. Incediso kwinkqubo yokusika kwaye inceda ngokulahlekelwa yintsipho ngelixa ligcina amandla namandla. Kuyafaneleka nje ngokuba yi-"recomp" agxina ukulahlekelwa kwintsebenzo kunye ne-muscle kunye nokufumana amandla. I-KT-11 inokukunceda ukudibanisa kwiitoni zeemisipha ezintsha kwaye ziza kutshisa amafutha amaninzi ngokukhawuleza ukwenza izihlunu zibukeke zibukhali ngendlela ekhangelekileyo nefanelekileyo.
Indlela i-11-Ketotestosterone powder isebenza ngayo
I-11-Ketotestosterone powder njenge-androgen enamandla iveliswa yientlanzi zesilisa ngaphezu kwe-testosterone. Kwimvavanyo yangaphambili, i-catfish yaseAfrika (iClarias carepinus) ibonise ukuba ayikho i-testosterone kodwa i-11-Ketotestosterone powder yakhuthaza i-spermatogenesis. I-Testosterone ngakolunye uhlangothi, ukuphuculwa kwe-pituitary gonadotroph.
Iinkcukacha ze-11-Ketotestosterone synthesis powder isaziwa ngabantu. Ukucaciswa kwemveliso kunye neepropati ezivela kwi-11-Ketotestosterone powder ebantwini yinjongo ephambili yale sifundo. Iigonads zomntu zaphandwa ngegama le-cytochrome i-P450 kunye ne-11beta-hydroxysteroid dehydrogenase iintlobo ze-1 kunye ne-2 eziyi-enzyme eziphambili ezibandakanyeka kwi-11-Ketotestosterone powder. Imveliso ye-11-Ketotestosterone powder yaphandwa kwiiseli ze-Leydig. Kwabesifazane be-10 kunye namadoda e-10 obudala bokuzala, iinjongo ze-plasma ze-testosterone zalinganiswa. Umhlaza wesifuba-owenziwe ngamaseli e-MCF-7 asetshenziswe ekuphenyweni kwepropati zayo. Iziphumo zokugqibela zibonise ukuba i-11-Ketotestosterone powder iveliswa kwi-gonads kwaye ibonisa i-androgen enkulu ebantwini kwaye inokuthi isebenze njenge-androgen engenakuqhathaniswa.
Olunye uphando lubonise ukuba amanqanaba aphezulu kwi-11beta-HSD1 ibinzana lidibaniswe namandla angaphantsi kwamadoda amakhulu. I-11-Ketotestosterone powder iyisishibithi se-11beta-HSD1, i-11-K inokuthi ithintele okanye ibuye iguqule ukulahleka kweminyaka yamandla omzimba. Iziphumo zibonisa ukuba ngokusetyenziswa kwe-11-KT, abaqhubi bexesha elidala bangakwazi ukugcina amandla okanye baphinde bafumane amandla ngenxa yokuguqulwa kweempawu ezindala.
Iinzuzo ze-11-Ketotestosterone powder
Esi sithako siyaziwa ngeempahla ezilahlekileyo zokulahlekelwa kwamafutha. Oku kufezekileyo kokuqala kokuqala kunye nabafundi abanamava ekwakheni umzimba kwaye baqwalaselwa ngokugqithiseleyo ekujikelezeni imijikelezo. Le isithako ilungile kakhulu kulabo abafuna ukulahlekelwa yioli kunye nokufumana amandla. I-11-Ketotestosterone powder nayo inokunceda abancedisi bomzimba badibanise iitoni zeemisipha kwaye babe kwindawo engcono kakhulu.
I-11-Keto-Testosterone ayinayo i-steroid enamandla kakhulu kodwa ingenza ukongeza okulungileyo kumjikelezo wokusika apho umntu efuna ukulahlekelwa ngamafutha kunye nokunciphisa i-cortisol. Ngoko, kumazwe apho kusemthethweni khona, kuthatha into encedisa ukulingana kobunzima ukusuka kumjikelezo oqhelekileyo wezinye i-steroids. Umthamo womlomo oqhelekileyo kufuneka ube yi-200-300mg ngexesha i-transdermal yayiza kuba malunga nesiqingatha ngaloo mini. Injectable, kuya kulungelelaniswa ne-ester kwaye isetyenziswe kwi-400mg ngeveki kunye ne-sithodi yokusika i-steroids njengo-Anavar okanye i-Masteron.
Isisombululo se-11-Ketotestosterone powder (i-CAS 564-35-2)
Esi sithako sinamandla kakhulu kodwa singenza ukongeza okongezelelweyo kumjikelezo wokusika apho umntu enqwenela ukulahlekelwa ngamafutha kunye nokunciphisa i-cortisol. Kwamanye amazwe apho kuthathwa njengezomthetho, yinto efanelekileyo yokugcina intlawulo echaphazela umgangatho wobunzima obuvela kumjikelezo oqhelekileyo wezinye i-steroid. Ngomlomo, i-dose efunekayo kufuneka ibe yi-200-300 mg ngelixa isiqingatha sale nto isetranshini ngosuku. Ukusetyenziswa kwe-injection, kulungelelaniswe kunye ne-ester ngomyinge we-400 mg ngeveki kunye namanye ama-steroid yokusika, uAnavar okanye u-Masteron umzekelo.
Iimpembelelo zemiSebenzi ye-11-Ketotestosterone powder
Ekubeni sele sele i-metabolite ye-testosterone, i-11-Ketotestosterone powder iyanqandwa ngokufanelekileyo. Ayikwazi ukuguqula kwi-estrogen okanye kwi-DHT. Inempembelelo yecala elingapheliyo elenza ukuba lilungele abo bangenayo imiphumo emibi ebandakanya ukulahleka kweenwele kunye nemiba ye-estrogenic. Akwayikho i-methylated yeso sokuba kungabangela ukuba uxinzelelo lwesibindi kungakhathaliseki nokuba lujoyiweyo okanye kwindlela yomlomo yokudla. I-11-Ketotestosterone powder inokulula kakhulu ukulawula iphrofayili yempembelelo yecala, ibe yinto enye yeyona steroids ephephile.
I-11-Ketotestosterone I-powder Marketing
Indlela yokuthenga i-11-Ketotestosterone powder evela kwi-AASraw
11-Ketotestosterone powder Recipes